Bụrụnụ Ọdịdị Nhọrọ | Martech Zone
Satọde, Febụwarị 13, 2010 Satọdee, Nọvemba 28, 2015 Bọọlụ Lorraine
Na ederede na nso nso a, Seth Godin jụrụ ajụjụ dị mkpa echere m na onye ọ bụla nwere azụmaahịa kwesịrị ịza: Gịnị kpatara gị? Gịnị mere ugbu a?
Na-eche ihu n'ọtụtụ edemede ngwaahịa, mana n'ezie na ọrụ ịntanetị anyị nwere nhọrọ. N'ihe banyere ndị na-enye Email, ndị ọrụ weebụ, yana ngwanrọ njikwa mmekọrịta ndị ahịa, onye nwere azụmaahịa maara ihe kwesịrị ịjụ onye nwere ike ịnweta: Site n'ọtụtụ nhọrọ, gịnị kpatara m ga-eji họrọ gị?
Mgbe m bidoro azụmahịa m, m na-atọrọ ọnụ ahịa kacha ọnụ ala, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-eme ya. Ma mgbe mụ na ndị na-akwụ ụgwọ dị obere kwurịtara okwu, nke a na-abụkarị mgbe ihe mere, amụtara m na oge m bara uru. Yabụ ugbu a, mgbe m nyochaa ngwaọrụ na akụrụngwa dị n'ịntanetị, enwere m ọtụtụ njirisi nke dị mkpa karịa ọnụahịa.
Ngwa a juputara my chọrọ. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ngwaọrụ CRM dị taa, m na-eji ya Adreesị, n’ihi na ọ bụ onye na-azụ ahịa dị ka nke m mere ya. Isi okwu, ubi, nhazi dashboard ma nwee nghọta maka m.
Enwere m ike ịchọpụta otu o si arụ ọrụ n’agụghị akwụkwọ ntuziaka toro ogologo, ma ọ bụ mee ka mmadụ gafee m. Enweghị m oge maka ngosipụta dị ogologo n'etiti ụbọchị. Ma ọ bụ ezie na m nwere ike ịgụ (nke ọma n'ezie) achọghị m iwepụta oge iji wụchaa ntuziaka ndị ahụ. Sọftụwia dị ka ọrụ, kwesịrị ijiri onwe ya ozi. Onye ọrụ interface kwesịrị kensinammuo. Aga m adị njikere itinye oge maka atụmatụ dị elu, mana nye m isi. Ọkacha mmasị m kachasị mfe nke njirimara onye ọrụ: Kpọtụrụ mgbe niile. (Achọrọ m ịma banyere mpaghara ahụ, akpọkwara m eziokwu ahụ asị na enweghị m ike ịkwado ụlọ ọrụ eMail nke Indianapolis ọ bụla, mana ahụbeghị m ihe ọ bụla dị mfe iji)
Ndị mmadụ Nyere Nka na ụzụ Nkwado. Mgbe m na-atụle ịbanye maka ngwa ọrụ dị n'ịntanetị, otu n'ime ihe mbụ m na-eme, tupu ịnye ha kaadị akwụmụgwọ m, bụ ịkpọ oku nkwado ha. Achọrọ m ịma ọtụtụ usoro nke 2,3,2,1,1,1,1,1 # aghaghị m ịkụ ọsọ tupu m nweta onye dị ndụ. Na mgbe m mere, ha na-arụ ọrụ na edemede, yana otu ụdị ajụjụ, ma ọ bụ na ha nwere ike ige ntị na nke m? Kpọọ onye na-ewu ụdị ntanetị n'ịntanetị'sMpempe akwụkwọ oru nkwado ma ọ bụ Nye i ga ahukwa ihe m na-ekwu. Ezigbo ndị mmadụ, nwere ike ịghọta ajụjụ gị. Ọ bụ ezie na GoDaddy enwetala nke ọma, nchere ahụ ka dị ogologo, ọnụ ọgụgụ nke ozi ị ga-enwe naanị iji nweta ajụjụ zara azaghị abụkarị ihe ezi uche dị na ya.
Ndị a bụ nke m “Gịnị mere ị, gịnị mere ugbu a”Njirisi. Eleghi anya abughi m onye ahia gi. Ọ bụrụ na m emeghị otú ahụ, hapụnụ echiche m. Ma echela na ị maara mkpebi mkpebi maka ndị ahịa gị. Wepụta oge jụọ ndị ahịa gị ihe kpatara ha jiri họrọ gị, ma melite nnyefe gị n'akụkụ ndị ahụ na ọnụahịa ga-adị ihe na-adịghị mkpa.
Tags: njikwa akaraahia ahiaKpọtụrụ na mgbe niilempempe akwụkwọnjikwa ngwaahịangwaahịa ahịaogeokirikiri